Driver | Max Myanmar Construction Co.,Ltd. ﻿
•	သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (၃)နှစ် အထက်ရှိရမည်။
•	အထက်တန်းအောင် (သို့) ဘွဲ့တစ်ခုခုရရမည်။
•	Auto/Manual (၂) မျိုးလုံးကျွမ်းကျင်စွာမောင်းနှင်နိုင်ရမည်။
•	ဘယ်မောင်း/ညာမောင်း (၂) မျိုးလုံးကျွမ်းကျင်စွာမောင်းနှင်နိုင်ရမည်။
Driver Driver, Security & Cleaning jobs Joblesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss JobsInYangon Max Myanmar Construction Co.,Ltd. Driver, Security & Cleaning jobs Driver, Security & Cleaning jobs Construction/Building Jobs in Myanmar, jobs in Yangon